Inqolobane: Ukuxoxa izindaba kwe-iPad | Martech Zone
ULwesine, May 22, 2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Sisanda kuba ne-webinar kwisayensi yokuxoxa izindaba nabangane bethu ku Ikhasino.tv. Akukusha ekuthengiseni nasekukhangiseni, kepha ngasizathu simbe, ukuxoxa izindaba sekuqale ukuqaphela eminyakeni yamuva nje. Abathengi nabathengi bebhizinisi bahlale beguquka kube lula uma kukhona ukubophezeleka okungokomzwelo phakathi kwabo nemikhiqizo abayithandayo… kodwa kuyathakazelisa ukuthi imidiya emidala, ebhaliwe futhi esabekayo iyaqhubeka yini ukusikhathaza kuthelevishini nakuwebhu.
Kuhle ukubona amapulatifomu aguqukayo ukusiza abathengisi ukuthi bathuthukise izindaba zabo kunokuqongelela ukonga noma izici. Isitolo sempahla ikhululekile Uhlelo lokusebenza lwe-iPad onethemba lokushintsha lokhu. Isitolo sigcina abasebenzisi ukuthi bakhe izindaba kusuka kumbhalo, ividiyo, nezithombe, kufaka phakathi okuqukethwe okuvela emithonjeni kufaka phakathi i-iPad Camera Roll, iDropbox, iFlickr, ne-Instagram.
Umphumela uba ezinye izakhiwo ezinhle kakhulu eziphendulayo ekubukweni kwewebhu, iselula nethebhulethi. Uma unohlelo lokusebenza lwe-iPad, awugcini nje ngokwakha nokubhala izindaba zakho, ungabhekabheka nezindaba ezintsha kakhulu ezikhiqizwe kwa-Storehouse.
Futhi, ukubuka kuqala kwendaba kungashumekwa ekhasini lewebhu. Nasi isibonelo:
Umphumela uyinto ebonakalayo enamandla angenamkhawulo - ukuhlanganisa zonke izinto nokungeza ekhonweni lokuthanda, ukwaba, noma ukubeka amazwana endabeni eyabiwe.
Tags: i-apulaikhanhalme.tvIbhokisi lokudonsaFlickrinstagramiOSipaduhlelo lokusebenza lwe-ipadUkumakethwa Kwamaselula NethebulethiisabeleIndabaUkuxoxa ngezindabatablet